महिलाहरूले राती यस्ता काम गरे घरमा लक्ष्मीकाे बास हुन्छ ! – ताजा समाचार
एजेन्सी । महिलालाई घरको लक्ष्मी मानिन्छ । महिला जसको घर जान्छिन् त्यस घरको परिवारको भाग्य र सफलता उनीसँग जोडिएको मानिन्छ तर ज्योतिष शास्त्रका अनुसार केही यस्ता कामहरु हुन्छन् जसलाई महिलाहरुले राति गर्नुहुँदैन । यसका कारण उनीहरुको समेत भाग्य फेरिने गर्छ । महिलाहरुले यस्ता कामहरु राति नगरेकै राम्रो
३. महिलाहरुले रातमा जुठा भाँडाहरु भान्छामा राख्नुहुँदैन । यदि राख्नै परेको खण्डमा पनि भान्सा कोठा वा घरभन्दा बाहिर राख्नुपर्ने हुन्छ ।
माथि उल्ल्खित ३ काम गरेको खण्डमा लक्ष्मीको बास हुन्छ भने वैभव, सम्पन्नता घरमा आउँँछ ।